Biyyattiiin Afriikaa dhiyaa Giinii keessaa prezidaantii filachuuf jecha sagalee filannoof kenname laka’ama jira.
Filannoon dilbata prezidaantii yeroo ammaa Alfaa Kondee fi hoogganaa garee mormituu Seeluu Daaleen Diyaaloo gidduutti geggeessame, baatilee heduuf geggeessamaa kan ture jeeqama siyaasaa heera haaraa fi falmisiisaa kan Kondee marsaa lammataa ol hojii irra akka turan eeyamu tasgabbeesse.
Kondeen kurna hedduuf liillisaa garree mormituu ta’anii erga turanii booda bara 2010 prezidaantii Giinii yeroo jalqabaaf adeemsa dimokraatawaan filataman ta’an. Heerri inni haaraan dimokraasiin biyyattii keessaa gad adeemuu isaa ilaalchisee gareelee mirga namaa biraa qeeqa hamaa akkasumas mormii cimaa kaasisee jira. Heera haaraa kana ilaalchisee mormii ka’een namoonni 50 ta’an du’aniiru.
Jala bultii filannoo sanaa, muumichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guteres qaamonni hirmaatan kan biyyoolessaa filannoon sun hunda kan haammatee fi nageenyaan akka geggeessamu gaafatanii jirau.
Guterres hoogganoonni siyaasaa fi deggertoonni isaanii gocha dubbii tuqatuu fi hookkara irraa of qusachuu dhaan falmii jiru karaa seeraan furmaata akka itti kennani waamicha dabarsaniiru. Ba’ii filannoo beeksisuun guyyoota hedduu fudhachuu mala.